Zvinotaridza kuti muna Kukadzi tichava neMoyo Wemwedzi Dambudziko zvakare | Ndinobva mac
Icho hachisi chimwe chinhu chatine 100% chakasimbiswa sezvo chisingauyi chakananga kubva kuApple asi zvinoita sekunge zvakare tichava nekubudirira nekuita hafu-awa kudzidziswa kwemazuva manomwe akateedzana. Mune ino kesi mazuva acho aizoenderana neZuva raValentine sezvazvakaitika gore rapfuura.
Icho chinetso chiri nyore icho vese vashandisi veApple Watch vanogona kuwana, izvo zvinoita kuti vazhinji vevaya vasingaite zviitiko zvezuva nezuva «vanokochekerwa» kuti vafambe uye ndizvo chaizvo zviri chinangwa cheiyi dambudziko yaanofunga kwatiri Apple nguva refu. Mune ino kesi, iyo Moyo Yemwedzi Dambudziko Inogona kuvhurwa iri rinouya svondo kubvira Yaizotanga muna Kukadzi 8.
Imwe-maminetsi makumi matatu evhiki ekurovedza muviri zuva nezuva
Ichi chinhu icho isu tese chatinogona kuwana uye icho ndechekuti kurovedza muviri kwakanakira hutano hwedu uye Apple inoda kuti isu tiwane chimiro saka ndeipi nzira iri nani pane yekuzvikurudzira pachedu kuburikidza nematambudziko aya. Zvakanaka, vazhinji vedu kana zvisiri vazhinji vedu tingangoda chinetso chakapihwa kune vashandi vekambani pane vachakunda tambo yeApple Watch yavo, asi musimboti tinofanirwa kugadzirisa kubudirira uye kunamira. Kyle Seth Grey, anga ari mushandisi anga atanga nhau idzi pa Twitter saka isu tinofanirwa kumirira iko kusimbiswa kwepamutemo:
Kuwana mubairo uyu kunotora moyo! Vhara yako Exercise mhete mazuva manomwe akateedzana kutanga Kukadzi 8 uye kupera 14 Kukadzi. #AppleWatch #VharaYakoRings pic.twitter.com/BkDrJoMCJM
- Kyle Seth Grey (@kylesethgray) January 29 we2019
Kana vhiki Yekuita yapera Kwemaminetsi makumi matatu pazuva, vashandisi vanogashira menduru nyowani kuti vawedzere zvakanangana nezvakaitika kare uye zvechokwadi zvitambi zvitsva kuti vakwanise kutumira mameseji ane hupenyu neApple Messages application. Tichamirira iko kusimbiswa kwepamutemo asi zviri zvimwe chokwadi kuti vachatanga chinetso chebasa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Zvinotaridza kuti muna Kukadzi tichava neMoyo Wemwedzi Dambudziko zvakare
Tim Cook anoti Apple ichatora chikamu mukuchinja kwe "TV package"
Apple inotarisana nemhosva yekutanga pamusoro peFaceTime chengetedzo chikanganiso